The Andaman, a Luxury Collection Resort, Langkawi nabatara otu ndị ọchịchị Epicurean
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » The Andaman, a Luxury Collection Resort, Langkawi nabatara otu ndị ọchịchị Epicurean
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
The Andaman, a Luxury Collection Resort, Langkawi kwupụtara nhọpụta nke ndị isi ọhụụ abụọ ga-arụ ọrụ na tandem iji bulie ahụmịhe iri nri nke Andaman ga-enye. Dika ndi ikike Epicurean ahuru ohuru nke Andaman, Quinn Pu na Stefano Micocci bu n'uche iweta ndi nchuputa uwa nile site na onodu nile nke akwukwo ndi ozo kwesiri itinye ha na ncheta ha.
Quinn Pu, onye mba China, ka a họpụtara ka ọ bụrụ Director ọhụrụ nke nri na ihe ọverageụverageụ. Site na efere jupụtara na ahụmịhe nkwari akụ na ahụmịhe na ihe oriri na ihe ọverageụverageụ, Quinn ga-elekọta ma duzie ngalaba nri na ihe ọ Beụ Beụ niile n'ime ebe a na-eme njem mgbe ị na-akwalite mmụba ego na nnabata afọ ojuju, na-echekwa ebe iri nri na Ogwe 6 pụrụ iche nke Andaman dị ka otu n'ime Langkawi's na-eduga ebe ị ga-eri nri pụrụ iche.
N'ime ihe karịrị afọ 15 nke ahụmịhe ọrụ, Quinn nwere ahụmịhe na United States, Ireland na ọnọdụ dị iche iche na ala nna ya, China tupu a họpụta ya imeghe Ritz-Carlton na Jiuzhaigou, China na 2017, ebe ọ nọ na-elekọta isi ndị bu ụzọ bidoro ndị F&B n’ugwu ahụ.
Andaman bu akara mbu nke Quinn na Malaysia. “Malaysia bụ nnọọ ewu ewu na China na m kasị obi ụtọ banyere nri idaha. M na-atụ anya ịhụ otú nri nri pụrụ iche nwere ike gbaa m ume, ọ bụghị naanị maka ọrụ m kamakwa na ndụ, ”ka Quinn na-ekwu.
N'ịbụ onye si Italytali, Stefano Micocci ka a họpụtara n'oge na-adịbeghị anya dị ka onye isi oche nke Andaman. Afọ iri abụọ nke ahụmahụ anụ ahụ, Stefano malitere njem nri ya na mpaghara dị iche iche nke beforetali tupu ọ gbaga na Middle East ma mesịa gaa Malaysia.
“Nri ndị Malaysia pụrụ iche. Ihe na-amasị m bụ ka nri ọ bụla nwere ngwakọta pụrụ iche nke ngwa nri dị iche iche nwere ụtọ dị iche nke gbawara na ọnụ gị, ”ka Chef Stefano na-ekwu. “Efere ọ bụla nwekwara akụkọ n’azụ ya ma achọpụtara m nke ahụ dị egwu. Iji akụkọ, akụkọ na mmetụta uche na - abịa - na - eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta mgbe ha na-eri nri, nke ahụ bụ ihe m na-achọ mgbe m na-eke usoro esi nri ọhụrụ. ”
Carman Tarrero, onye isi njikwa nke Andaman na-ekwu, sị: "Andaman ahụ bụ onye na-agba ọsọ n'ihu na-eri nri na agwaetiti ahụ, na-esetịpụ akara ngosi na omume kachasị mma na ahụmịhe echefu echefu yana nkwado. "Site na ndị ọchịchị Epicurean ọhụrụ a, enwere m obi ike na anyị ga-enwe ike ịkwanye oke ókè ọbụna ịbụ ọsụ ụzọ n'àgwàetiti ahụ.”
Ndi Andaman buliri ogwe na ulo oriri na-adighi anya mgbe ulo oriri nke ulo nri nke Jala bidoro na 2013. Site na ebe a na-enwe udiri aja, uzo mara mma na ikuku di egwu, Jala na enyere ndi obia aka inabata mma nke okike. ebe ị na-anụ ụtọ nri ọhụrụ dị na mmiri nke ndị isi nri na Jala na-edozi nke ọma, na-agbakwunye ele ọbịa nke ndị Malaysia.
Iji hụ na azụ ndị dịkarịsịrị ọhụrụ na-abịarute kwa ụsọ mmiri nke Andaman, Jala esorola ndị ọkụ azụ̀ na-emekọ ihe, si otú a na-enyere obere azụmaahịa Langkawi aka. N'ehihie ọ bụla, ndị ọbịa nwere ike ịtụ anya ị ga-aga n'ụsọ osimiri iji kirie ndị isi Jala ka ha na-emekọ ma na-akparịta ụka n'etiti ndị na-akụ azụ na mpaghara maka ịzụta nri azụ ọhụrụ.